Paoma | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ny fomba hanamboarana ranom-boanjo mahalany amin'ny ririnina amin'ny fampiasana jiro
Anisan'ny betsaka amin'ny zava-pisotro misy voankazo ny jiro apipe. Milaza ny mpahay siansa fa "rano velona" ny mpahay siansa, satria tsy mamela ny vatantsika fotsiny izy io, fa manakana ny aretina isan-karazany, indrindra raha misintona ilay izy.
Ny fomba tsara indrindra amin'ny paoma mangatsiaka amin'ny ririnina
Ny paoma mandrehitra ny ririnina dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra ahafahanao mihinana sakafo ara-pahasalamana bebe kokoa sy mahavelona amin'ny vitamina. Noho ny vidiny ambany sy ny fialan-tsasatry ny fijinjana, ireo voankazo dia ampiasaina betsaka amin'ny sakafo. Mpihinam-bary maivana no mahafantatra dipoavatra an-jatony avy amin'ny paoma mangatsiaka, izay hahasoa ny vatana izay malemy noho ny hatsiaka amin'ny ririnina.
Tombontsoa mahasoa sy fanoherana amin'ny pòm maina: fanangonana sy fitehirizana
Ny fanasana dia fomba tsotra indrindra hamokarana paoma ho an'ny ririnina. Noho ny famokarana simika manan-karena, manana paoma maro manasitrana ny paoma maina. Ny maintin'ny Apple dia ampiasaina betsaka amin'ny sakafo: Ankoatry ny volo malaza, dia ampiasaina ihany koa izy ireo hanamboatra pies, pancakes, salady, jelly, nanampy trondro sy dite, ary nihinana ahitra.
Sakafo feno poma ho an'ny ririnina
Ho an'ny ankamaroantsika, ny paoma voatokana ho an'ny ririnina, toy ny compotes, ny juices ary ny fiomanana hafa, dia mifandray amin'ny fialantsasatra sy ny tsy fahazahoana ny fahazazana. Ary ny takelaka, izay, ankoatra ny paompy, misy voankazo sy voankazo hafa, dia mitondra antsika any amin'ny ririnina amin'ny faran'ny ririnina izay fahatsiarovana ny saham-boankazo. Ankoatr'izany, ny paoma no tena tsara ho an'ny fahasalamana, satria matetika dia tsy vitan'ny vitamina ny ririnina.
Ahoana no hampitombo ny karazany apetaka tsara ao amin'ny zaridainy
Apple Tree Delight dia manintona ireo zaridaina maro karazana. Ny voankazo dia manintona ny haben'ny habeny, ny sisin'ny mena ary ny fofona manitra. Ny tsirony mahafinaritra mamy miaraka amin'ny fanamarihana mena sy ny hafanana hafakely dia mahaliana. Mbola bebe kokoa noho ny fahamatoran'ny hazo apalalany, ny fanoherany ny aretina sy ny hafanana. Andao hiezahantsika hahatakatra ny tombontsoa sy ny fiantraikan'io karazana divay vaovao io, ary koa ny fanadihadiana ny toetoetry ny hazo ao amin'ny fikarakarana.
Ny fitaovana tsara indrindra amin'ny fanangonam-bolo ny ririnina
Sakafo Apple ho an'ny ririnina araka ny fitsaboana azo itokisana dia ho fanampiny fanampiny amin'ny sakafo isan'andro. Amin'ny fikarakarana ny teknolojian'ny fanomanana, ireo vokatra ireo dia tsy hahafaly fotsiny ireo mpankafy apela amin'ny tsirony mahafinaritra, fa ho lasa loharano azo avy amin'ny vitamina ho an'ny vatana. Fantatrao ve? Ao amin'ny sary hosodoko rehetra tany Rosia fahiny, ny saha Edena dia nambolena tamin'ny hazo paoma.
Ahoana no hanamboarana pòm any an-trano
Ampiasainay ny manao paoma amin'ny mofomamy, manamboatra potipotika sy jellies, manakatona compotes na mampiditra azy ireo ho toy ny famenoana mofo, fa tsy azo ampiasaina amin'ny voankazo izany, ka azonao atao ny manandrana matsiro tsara sy matsiro. Karazana bitsika sy fomba fanaovana azy ao an-trano - vakio.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Paoma